နိုင်ငံခြားရေးမိတ္တူ - အခြားတိုင်းပြည်ကနေမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ခရက်ဒစ်၏လွှဲပြောင်း | USAHello | USAHello
နိုင်ငံခြားရေးမိတ္တူ – အခြားတိုင်းပြည်ကနေမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ခရက်ဒစ်၏လွှဲပြောင်း
သငျသညျအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌လေ့လာနေစတင်ချင်လျှင်, သင်သင်သည်သင်၏နိုင်ငံတွင်တယ်ပညာရေးကဏ္ဍကိုပြသဖို့လိုအပ်ပါတယ်. သင်တို့သည်လည်းသင့်ရဲ့ပညာရေးကိုအလုပ်ပိုင်ရှင်များအတွက်တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်. သငျသညျနိုင်ငံခြားမှတ်တမ်းများအကဲဖြတ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်. သို့သော်သင်သည်သင်၏တိုင်းပြည်အတွက်လက်မှတ်သို့မဟုတ်ဘွဲ့များပင်လျှင်, သင်အဟောင်းအလုပ်အတွက်အလုပ်မလုပ်ဖို့ပိုအတန်းသို့မဟုတ်စမ်းသပ်မှုများယူပေးရန်လိုအပ်ပါမည်.
نسخة طبق الأصل – အဆိုပါစက္ကူအထက်တန်းကျောင်းသို့မဟုတ်ကောလိပ်အတွက်ရရှိသောတန်းစီစာရင်းပြုစု. လူအများစုဟာဘွဲ့ရပြီးနောက်သူတို့ကိုအရ. သငျသညျအများအားဖြင့်ကျောင်းအနေဖြင့်ပိုပြီးနိုင်ငံခြားကျမ်းအဘို့တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်.
التقييم الأكاديمي – ပညာရေးဆိုင်ရာအကဲဖြတ်သင်၏စာသားဘာသာပြန်ဆိုကြောင်းကုမ္ပဏီများကကောက်ယူကြသည်နှင့်သင်ရှာနေ. သင်သည်သင်၏နိုင်ငံတွင်တယ်ပညာရေးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌တူညီသောသို့မဟုတ်အလားတူရှိမရှိဆုံးဖြတ်.
الاعتمادات المدرسية تستخدم المدارس والجامعات الأمريكية نظامًا اعتمادياً (အကြွေး). الاعتمادات – عبارة عن أرقام يتم تعيينها لكل فئة أو دورة تدريبية. အများအားဖြင့်, အတနျး 2-3 ခရက်ဒစ်. သငျသညျဘွဲ့ရမီ, သငျသညျအခြို့စုစုပေါင်းခရက်ဒစ်ရရန်ရှိသည်.
الدرجة العلمية – သိပ္ပံနည်းကျဒီဂရီတက္ကသိုလ်သို့မဟုတ်ကောလိပ်ကနေဒီပလိုမာဖြစ်ပါတယ်.
သငျသညျကျွမ်းကျင်မှုမရှိဘဲအလုပ်ရှာနေခဲ့လျှင်, သင်သည်သင်၏ပညာရေးသက်သေပြရန်မလိုအပ်ပေမည်. ခြေဘဝါးအချို့အလုပ်အကိုင်များအပေါ်သူတို့ကနိုင်ငံခြားကူးယူရန်သင့်အားမေးနေကြတယ်ရှိမရှိသိကြ. သင်တစ်ဦးအထက်တန်းကျောင်းဒီပလိုမာသို့မဟုတ်ကောလိပ်ဒီဂရီရှိပါကလည်းအချို့အလုပ်အကိုင်များကိုပိုမိုပေးဆောင်. သငျသညျနိုင်ငံခြားမှတ်တမ်းများအကဲဖြတ်ရန်ရန်မလိုအပ်ခဲ့ကြပါလျှင်, သင်အကဲဖြတ်ကြေးပမာဏကိုပေးနိုငျ.
သင်တစ်ဦးအလုပ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အနေအထားပူဇော်လျှင်, သင်ကျိန်းသေသင့်ရဲ့ဒီဂရီတစ်ခုအကဲဖြတ်ရသင့်တယ်. ဒါကြောင့်အချိန်အနည်းငယ်ကြာစေခြင်းငှါဖြစ်သောကြောင့်အလုပ်အကိုင်များကိုရှာဖွေချက်ချင်း Start.
ပထမဦးစွာသင်၏ကျောင်းတစ်ပုံတူ get. ထို့နောက်ကုမ္ပဏီမိတ္တူအကဲဖြတ်ဖို့သူတို့ကိုတင်ပြ. အများအားဖြင့်, အကဲဖြတ်နှစ်မျိုးရှိပါတယ်:
စာသားမနေထိုင်သူလူအပေါင်းတို့သည်အတန်းတဦးတည်းအားဖြင့်တဦးတည်းယူကြည့်ဖို့နိုင်ငံခြားမိတ္တူကြည့်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်. သငျသညျအမရေိကနျပွညျထောငျစုတှငျလိုအပျနသေူမြားဆင်တူစာသင်ခန်းရာ၌ခန့်ထားပြီလျှင်သူတို့ကတွေ့ချင်ပါတယ်. သငျသညျကောလိပ်မှမိတ်ဆက်ချင်သည့်အခါဤအမှုကိုပြုသောဖြစ်ပါတယ်. အများအားဖြင့်အကြားကုန်ကျ 150 နှင့် 200 ဒေါ်လာစျေး.
စာသားမနေထိုင်သူငါမူရင်းသင့်ရဲ့တိုင်းပြည်ကနေရတယ်ဖို့ဒီဂရီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌တူညီသောဒီဂရီလက်မှတ်ရှိမရှိကြည့်ဖို့နိုင်ငံခြားမိတ္တူကြည့်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်. အခါအလုပ်အပေါ်တိုးတက်မှုဤသည်မှာအများအားဖြင့်ပြု. အကြောင်းကိုကုန်ကျ 400 ဒေါ်လာစျေး.
တစ်ခါတစ်ရံကကျောင်းကိုသွားကြောင်းပိတ်ပစ်စေခြင်းငှါ. ဒါဟာအစတစ်ခုမလုံခြုံဧရိယာထဲမှာရှိနိုင်ပါသည်. နှစ်ဦးစလုံးကိစ္စများတွင်, သင်သည်သင်၏ကျောင်းတစ်ဦးမိတ္တူရရှိရန်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ. သငျသညျအလုပျများ၏မိတ္တူရရှိရန်ကြိုးစားနေလျှင်, လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ကုမ္ပဏီ၏ဦးစီးဌာနကရှင်းပြ. သောကျောင်းကိုဆက်ကပ်အပ်နှံခဲ့သည်ဆိုပါက, သင့်ပြဿနာနှင့် ပတ်သက်. ကျောင်းဝင်ခွင့်များဦးစီးဌာနကိုဆက်သွယ်.
သင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌သင်တို့၏လေ့လာမှုများဖြည့်စွက်ဖို့ပိုသင်ခန်းစာများကိုလိုအပျကွောငျးကိုပြောသည်စေခြင်းငှါ. ဒါကခံစားချက်ကအရမ်းစိတ်ပျက်စရာဖြစ်နိုင်သည်. ဒီအကြောင်းပြချက်ရှိကွောငျးကိုအောကျမေ့. ဥပမာအားဖြင့်, United States မှာအီရတ်နှင့်ဗိသုကာပညာရှင်တစ်ဦးဗိသုကာပညာရှင်တူညီသောအလုပ်လုပ်နိုင်. ဒါပေမယ့်သင်ယူမှုများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောစနစ်များကိုရှိပါတယ်.
သငျသညျသူတို့ကိုငါဖြည့်ရန်သင့်နိုင်ငံအတွင်းရှိပညာရေးများစွာသောသဘောတူညီချက်ရတယ်အလုပ်တစ်ခုရှိပါကသင်သည်အသစ်တစ်ခုကိုလက်မှတ်မရသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသင်ခန်းစာများကိုလက်ခံရရှိရန်အလုပ်မလုပ်ဖို့လိုပမေ. ဆရာဝန်များ, ရှေ့နေများနှင့်ဆရာ, ဆရာမဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုရန်လိုအပ်ပါတယ်. လက်မှတ်များလိုအပ်မအလုပ်အကိုင်များ, သင်အသစ်တစ်ခုကိုလက်မှတ်မလိုအပ်ပေမည်. သင်အလုပ်လုပျနိုငျကြောင်းကိုသင်၏ကျွမ်းကျင်မှုကိုပြသရုံနဲ့မလုံလောက်ပါလိမ့်မည်.
သင်ဆန်းစစ်သုံးသပ်ခြင်း၏ရလဒ်များကိုအကြောင်းကိုရှုပ်ထွေးဖြစ်ကြပြီးသင်ပိုမိုအကူအညီရလိုလျှင်, သင်အကဲဖြတ်ကောက်ယူသောကုမ္ပဏီဆက်သွယ်နိုင်သည်. يمكنك أيضاً مقابلة مستشار المدرسة. ဒါဟာသင့်ရဲ့အကဲဖြတ်ဖတ်ပါရန်သင့်အားကူညီပေးပါမည်နှငျ့သငျယူအတန်းဖို့လိုအပ်ကြောင်းသင်ပြောပြလိမ့်မယ်.
هناك العديد من الشركات على الانترنت التي تقول أنها تقيم النصوص. انتبه! بعضها الحيل. قد تحصل على معلوماتك الشخصية أو أموالك التي تم أخذها منك. ولكن هناك شركات صادقة يمكنك استخدامها، ကမ္ဘာ့ဖလားပညာရေးန်ဆောင်မှုများ, ပညာရေးဆိုင်ရာအကဲဖြတ်န်ဆောင်မှုများ, နှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာယုံကြည်စိတ်ချရသော Evaluators မှ Inc မှ..